Teknụzụ, n'ezie, bụ ụzọ ịnabata nke a. Nke a apụtaghị na ndị mmadụ na usoro adịghị mkpa, ọ pụtara naanị na itinye ego iji nye ndị ahịa gị uru bụ n'ikpeazụ bụ itinye uche n'echiche gị.
Emepụtara na mmekorita ya na ndi oru ihe omuma na ndi oru mgbasa ozi 360i, na ndị mmekọ teknụzụ Lablọ nyocha kọfị Kroger's Chefbot na-enye mkparịta ụka mkparịta ụka enyi na enyi maka ịhapụ ihe omume oge nri na mkpofu ihe oriri n'ụlọ-nsogbu ndị a na-ahụkarị maka ọtụtụ ndị ezinụlọ na-anọgide na-erikọ nri ọnụ n'ụlọ.
Ahụmahụ Chefbot na-agụnye ọtụtụ ntụpọ, na-enye mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta site na njikọ Twitter Kroger.com ngwa ahia e-commerce. Ka oge na-aga site na nghọta a mụtara, nchọpụta nri Chefbot na teknụzụ ọchụchọ usoro ga-agbanwe ma melite, na-enye ohere nke ngwa ọrụ a dị ike ịmalite.
Ọ na-arụ ọrụ nke ọma! N'ezie, agbalịrị m ịtụfu ya bọọlụ na ụfọdụ ihe ndị dị egwu na mbụ. Maka ule nke abụọ m mere, etinye m akpa nke ọkụkọ oyi na oyi kpọnwụrụ na tebụl wee zipụ ya.
Ihe si na ya pụta bụ ụfọdụ nnukwu Ntụziaka echiche! Ọ bụrụ na ị na-nitpicking… eleghị anya ị na-ekwu na ya nyochawa abụghị broccoli na m nwere akpa nke. Ezi… na m na-eche ma, kama, Kroger nwere ike iji mara njirimara na mgbakwunye na nke oyiyi ude ịgafe Efrata na ngwaahịa n'ezie enwere ike ịgụnye na ntụziaka.
Kedu ụzọ ọ bụla, ọ bụ nnukwu ọrụ. Ma, obi abụọ adịghị ya na ọ na-enweta Kroger ụfọdụ mmata nke ọma yana yana ekele maka inye aka. Abụ m onye osi ite… yabụ olile anya na ọ ga - enyere m aka imeziwanye!
Tags: aionye siri nri botchefbotụlọ ahịa nriEbeeụlọ ahịa